merolagani - युनियन हाइड्रोपावरको आईपिओमा पहिलो दिन कति पर्यो आवेदन ?
युनियन हाइड्रोपावरको आईपिओमा पहिलो दिन कति पर्यो आवेदन ?
Mar 28, 2019 Merolagani
युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी (UHCL) को आईपिओमा पहिलो दिन बुधबार ७ करोड २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको आवेदन परेको छ। बिक्री प्रबनधक लक्ष्मी क्यापिटलका अनुसार ८ हजार ४ सय भन्दा बढी आबेदनवाट ७ लाख २० हजार कित्ताको लागि आवेदन परेको हो।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट अवितरित समेत कूल ३५ लाख ३४ हजार ३४० कित्ता शेयर निष्काशनमा ल्याएको हो ।
कूल निष्काशित आईपिओमध्ये ७० हजार ६८६ कित्ता हाइड्रोपावरका कर्मचारीहरुलाई सुरक्षित गरिएको छ । सामूहिक लगानी कोषहरुले खरिद नगरेपश्चात बाँकी ३४ लाख ६३ हजार ६५४ कित्ता शेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
यस आईपिओ छिटोमा चैत १७ गते बन्द हुनेछ भने आवश्यक आवेदन नपरेको खण्डमा बैशाख १२ गतेसम्म खुला रहनेछ । इच्छुकले लगानीकर्ताले मेरो शेयर सफ्वेयर तथा धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति पाएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७७ जिल्लाबाटै आवेदन गर्न सकिनेछ। आईपिओमा न्यूनतम ५० देखि अधिकतम ३५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ।